Hanarina sa hanarona ?
Tsy mahalala menatra !
Mifampihantsy sy mifampidera taim-by ara-bakiteny ankehitriny na ny eo anivon’ny fitondrana, izay milaza sy miantehatra fatratra fa mahery sy tompon’ny fahefana,
Iza no vonon-kiasa ?
Lasa ihany ny eritreritra mahita an-dramalagasy ankehitriny misary resy tanteraka noho ny fidangan’ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana andavanandro vokatry ny resabe ataon’ny mpitondra sy ny mpanao politika tsy mahatonga vary sy laoka any am-bilaniny.
Mipararetra ry kanosa
Niezinezina ny fanambaran’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana omaly ny fahavononany sy firosoany hatrany hanarina an’i Madagasikara, ary izay no niadiany mafy ny hiverenenany teto Madagasikara.
Olona no olana
Rafitra, rafitra, rafitra ! Izay hatrany no tanisaina fa mahatonga ny tsy fetezan-javatra rehetra eto. Mila manova rafitra isika na koa hoe mila fanorenana ifotony mihitsy ity firenena ity.
Aoka hazava kosa e !
Malaza sy fitaovana hivoizana hevitra sy fampitam-baovao ara-politika na zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina ny tambajotran-tserasera « facebook » amin’izao fotoana izao.
Lany andro mitangirika
Nigadona omaly teto an-tanindrazana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, rehefa avy nanao fitsidihana tany Japon nandritra ny andro maromaro niaraka tamina delegasiona maro be. Nisy ny fifampiresahana tany, ary dia nahazo toky tamin’ny mpitondra ity firenena ity indray fa hanohana an’i Madagasikara izy ireo.
Efa iaraha-mahita ankehitriny fa miezaka manindraindra an-kolaka, izay mety ho kandidany amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny antokon’ny fitondram-panjakana HVM.
� Raha tonga amin�ny frankofonia ny fampandrosoana, arahaba soa, arahaba tsara. Raha tsy tonga, mitohy ihany ny fampandrosoana �.
Volana vitsy izay no lasa nahenoana io teny io nivoaka tamin’ny vavan’ny filoham-pirenena, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety nandritry ny fitsenana vahiny iray teny Ivato. Miha mazava ankehitriny io tenin’ny filoha io fa mety tsy hampandroso antsika ny frankofonia. Inona no antony ? Mety noho ilay fahantrana afenina amin’ny alalan’ny tsy famelana ireo mpitrongy vao homana hivoaboaka io. Maninona tokoa moa no mihatsaravelatsihy kanefa lazaina fa fifanakalozana ahitana tombontsoa no tanjona ? Ny fitondrana indray ve no mila ampianarina fa ny fifampitokisana dia teraka rehefa mendrika izany ny an-daniny sy ny an-kilany ? Ahoana no ahafahan’ny olona matoky anao raha mbola misy marina izay tokony ho fantany ka afeninao ? Ary raha ho hitany amin’ny ora tsy ampoizinao izany dia ahoana no mety ho fiantraikany ? Tsy mahagaga raha tsy mbola misy mpamatsy vola matoky antsika hatramin’izao satria ilay fahavononana hanarina ny firenena mihitsy no tsy misy fa ny seho ivelany hanarona ny fahantrana no be dia be. Hanarina sa hanarona ?